Posted by သက်ဝေ at 8:15 PM
ဝေ December 18, 2011 at 8:51 PM
I forgot to breath while i was reading .Feeling ta thaint thaint....
MG THANT December 18, 2011 at 9:26 PM
gone this way :)
ဖြူ December 18, 2011 at 9:56 PM
မျှော်လင့်မထားတဲ့ အချိုးအကွေ့လေးကို ပုံဖေါ်ရေးသွားတာ သိပ်ကောင်းတာပဲ...
feel something :(
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! December 19, 2011 at 12:45 AM
အမျိုးအမည်မသိ မဖော်ပြတက်သော်လည်း ခံစားမှု လေးတစ်ခု စီးဝင်နေတာ အမှန်ပဲမမ...ကျေနပ်နေမယ်လို့ ယုံကြည်နေ ပြန်တယ်..
ပြည်ကောင်းအောင် December 19, 2011 at 12:58 AM
သူလည်း သူမကို တဖက်သတ် စွဲလန်းချစ်ခင် ခဲ့ပုံပဲ.. ဒါပေမဲ့သူမကို အသက်ချင်း ကွာတာမို့ အားနာ/ မပြောရဲလို့ ဘာမှ မပြောခဲ့တာ ဖြစ်မယ်။ ဘယ်အရာ မဆို အစစ် က တာရှည်ခံတယ်လို့ ထင်မိပါတယ်..။
သူနဲ့ သူမတို့ ဖြူဖြူစင်စင် ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပုံ နဲ့ သူနဲ့ သူမရဲ့ အမျိုးသားတို့ အဖွဲ့ကျသွားပုံလေးက ကြည်နူး စိတ်ချမ်းမြေ့စရာ ..
( ကျနော်က ဖဘပေါ်မှာတော့ အေးကျော်ဇံ ပါဗျး)
ကျောင်းသားဘ၀မှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ စိတ်ဝင်စားခဲ့တဲ့သူတွေကိုတောင်ပြန်သတိရသွားပြီ။
သတိုး December 19, 2011 at 1:06 PM
လောဘလှလှလေးပေါ့ ဗျာ။ ကိုယ့်ကိုယ့်ကိုယ် မသေချာချင်၊ မသေချာရဲ ပေမယ့် တစ်ဘက်ကိုတော့ သေချာစေချင်နေတာ ဘယ်လောက်လူသားဆန်လိုက်သလဲ..။
Hmoo December 19, 2011 at 1:08 PM
မဒမ်ကိုး December 19, 2011 at 1:21 PM
လွမ်းမိပါရဲ့ မမရေး)
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) December 19, 2011 at 2:58 PM
ကျောင်းတုန်းက အချိန်လေးတွေကို သတိရသွားမိတယ်။ ခုလိုပေါ့.. အကောင်အထည်မပေါ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အဖြူရောင်သံယောဇဉ်တွေအကြောင်းလေးတွေပေါ့လေ...း)း)
Nyi Linn Thit December 19, 2011 at 6:08 PM
ဖြူဖြူစင်စင်နဲ့ကို လွမ်းမောရတဲ့ ဝတ္ထုတိုလေးပါပဲ မသက်ဝေ..၊ မျှော်လင့်ခြင်းတွေ၊ ဝမ်းသာ၊ ဝမ်းနည်းမှုတွေနဲ့ လှလှပပကို ရက်ဖောက်ထားသလို နူးညံ့မှုတွေ ဖွေးဖြူစွာနဲ့ အဆုံးသတ်လိုက်လို့ တကယ်ပဲ သဘောကျမိတယ်..၊ Two thumbs up...!!!
မြသွေးနီ December 20, 2011 at 12:48 PM
မဖော်ပြဖြစ်ခဲ့တဲ့ အဖြူရောင်ကြိုးမျှင်တွေ...။ သူ့ရဲ့ ကလေးလေးတွေရဲ့ ပုံတွေ တွေ့ချိန်မှာလည်း ကြည်နူးကျေနပ်စိတ်ဖြစ်နေမိတာလည်း အံသြစရာနော်..။ အဲ့လိုကြိုးလေးတွေက ရှိနေတတ်၊ အမြဲသိနေတတ်တဲ့ ကြိုးမျိုး။
mirror December 22, 2011 at 12:51 AM
" သြော်.. သုံးဆယ်ကျော်မှ ပြန်ဆုံရတယ်လို့ အချစ်ရယ်.. မင်းကို ကိုယ်နှုတ်ဆက်မိတာကတော့ မင်းတို့မိသားစုတွေ ကျန်းမာလို့ချမ်းသာရဲ့လား၊
အော်.. သုံးဆယ်ကျော်မှကြုံရတဲ့ အချစ်ရဲ့ ဒဿနတွေပါဗျာ" :D
လေးဆယ်ကျော်ကနေသုံးဆယ်ကျော် ပြောင်းထားတယ်နော် မကြီး။
အလကား အလကားနောက်တာပါ။ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ပိုစ့်လေးကိုဖတ်ပြီး စိတ်ညစ်နေတာတွေတောင် လျော့သွားသလိုရယ်။
ပြီးတော့ တွေးမိသေးတယ်. အော် ဟိုအရင်က တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူ/သား ဆိုတာ ဒီလိုလူတွေပါလား။ အချစ်ကိုလဲ ဒီလိုယုယတတ်ကြတာပါလားပေါ့။
နွေမိုး December 22, 2011 at 3:35 AM
Hmoo January 25, 2012 at 12:44 PM
မြတ်ပန်းနွယ် June 21, 2012 at 11:50 AM
ဝတ္တုလေးဖတ်ပြီးတော့ ရင်တွေ မောသွားတယ်။ ဖတ်နေတုန်းက အသက်ရှုလိုက်မိရဲ့လားတောင် မသိဘူး။ အရေးအသားက ဆွဲဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
San Htun November 4, 2013 at 9:45 AM
အား...ဖတ်ရတာ လွမ်းဆွေးသလို၊ ကြည်နူးသလို၊ ချစ်စရာကောင်းလိုက်တဲ့ ဝထ္ထုလေး...း)
Ko Kyaw Oo October 16, 2014 at 2:05 PM
ပြီးခဲ့ တဲ့ နှ စ်တွေ က ဒီ စာကို ဖ တ် ခဲ့ ဖူးတ ယ် ၊
လွ မ်းစ ရာ- ချ စ် စ ရာ- ကြ ည် နှုးစ ရာစာတ စ် ပု ဒ် လို့ ခံ စား ရ တာပါ ၊ ဘာမှပြောစ ရာမ ရှိ ခဲ့ ပါ ဘူး၊ ခု တ စ် ခါ ပြ န် ဖ တ် မိတော့ စာေ ရးသူ ရဲ့ ခုနောက် ပို င်းေ ရးတဲ့ စာေ တွ မှာအ ခု ဒီ စာေ လးလို အရေးအ သား သ ပ် ရ ပ် လှ ပချောေ မွ့အောင် စိ တ် ရှ ည် လ က် ရှ ည် မရေးေ တာ့ သ လို ပဲ လို့ ထ င် မိ ပါ တ ယ် ၊ ကျနော့် အ မြ င် ပါ ၊ ခုနောက် ပို င်းေ ရးတဲ့ စာေ တွ လ ည်းစိ တ် ကူးေ ကာင်းအတွေးေ ကာင်းေ ကာင်းနဲ့ရေးတာပဲ လို့ ဖ တ် ရ င်းသိနေပေ မ ယ့် အ ခု စာေ လးလို အ ရ င် တု န်းက ၂ ၀ ၁ ၀ နဲ့ ၂ ၀ ၁ ၂ အ လွ န် များ မှာေ ရးခဲ့ တဲ့ စာေ တွ က ပို ပြီးလှ ပ သ ပ် ရ ပ်ချောေ မွ့နေ တ ယ် လို့ ထ င် မြ င် မိ ပါ တ ယ် ၊ အဲ့ လို စာေ ကာင်းေ တွ ဆ က် လ က်ရေးသား နို င် ပါစေ လို့ ဆုတောင်းပါ တ ယ်